Pet nnapụta saga - it's a lot more involved than it looks! - Pet Rescue Saga
“M anwụrụ swiiti na otutu pears gburugburu, Ọ bụrụ na m chọrọ nnapụta anu ulo m ga-isi anụmanụ ndo” ọma na ihe m kwere m nwere ike kwuru, sị. Ọ bụrụ na ị na mgbe ọkpụrụkpụ a King njem mgbe ị nwere ike na ụfọdụ echiche ihe ị na-na n'ihi na….dị nnọọ Na ghọgburu site cheery na agba na cute critters nke Pet Rescue…“Ọ ga-fun ha siri, sonyere anyị na ha siri! ị na-akwa na egwuregwu ị ga-a n'anya” o nwere! ọma ee ọ na-enyo ya bụ fun, na ihe na-eri ahụ 'm ike ọbụna icheta ma ọ bụrụ na m ọbụna onwe ezigbo anu ulo ọzọ’ ụdị ụzọ!
So if you’ve crushed your way through a tonne of candy and defied gravity to prove the aerodynamic aptitude of your Papa Pears and are ready for some more thrilling adventures then please join us on our voyage of discovery through the gnarly world that is home to the pet Rescue Saga. Ebumnuche nke egwuregwu bụ n'enweghị osụhọde anu ulo na ala na ihuenyo site na-ekpocha na acha nkanka n'okpuru ha. Iji na ikpochapụ nkanka ị ga-pịa na abụọ ma ọ bụ karịa n'akụkụ nkanka nke otu na agba, ndị ọzọ nkanka sonyeere na sụrụ elu isi ihe, na quicker gị dara ogbenye anu ulo iru ala.
Onye ọ bụla larịị nwere n'ozuzu ebumnobi abụọ; napụta a ụfọdụ ọnụ ọgụgụ nke anu ulo na akara a ụfọdụ ọnụ ọgụgụ nke ihe, mfe nri! yeah nke ahụ bụ ihe m chere na mbụ oke! Now there are some funky boosters available that are definitely handy in clearing unwanted blocks, ma na na a coiner, n'agbanyeghị otú m na-ele ya ọ dịghị otú m nwere ike ziri ezi na-akwụ ụgwọ na-egwu egwuregwu na ozi ọma ahụ bụ na ị na Na na-, niile na ọkwa iru enweghị azụ boosters…i nwere ike Otú ọ dị nwere na-amalite na-arịọ enyi gị maka ndụ!
Kpachara anya ghara ka anu ulo na-ada.
Dị ka ị kpochapụ nkanka ihuenyo Akwụkwọ Mpịakọta ala, nke atọ bụ bụla blocks (ma ọ bụ anu ulo) na n'elu ihuenyo mgbe ị na-agba ọsọ nke n'ịgwa ka anam ọdịda ha dara, kemfe ma ọ bụrụ na ha na-achọghị blocks, not so much when they are essential pets needing rescue. Score enough points in succession however and in some levels you are rewarded with a firecracker that can clear an entire vertical column of blocks, nnọọ kemfe n'ezie! Pet Rescue saga bụ ala akara ọzọ egwuregwu atụmatụ na nkà na a ole na ole ezigbo ntiwapụ ẹsịn ke maka fun. Unu a kụdara m dịtụ obi ọjọọ iwebata…M na-N'eziokwu rapaara na ihe insanely siri larịị na moment..so e na!
Pet nnapụta saga - it's a lot more involved than it looks!, 6.6 out of 10 based on 10 ratings